Asa fa tsy kabary - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
An-taona maro no nitadiavantsika ny atao hoe « fandrosoana ». Ary anisan’ny heverin’ny maro fa sakana ho an’ny fampandrosoana eto amintsika ny « resabe ». Ny kabary rehefa tafaray amin’ny politika dia sokajiana ho « resabe ». Izany hoe, mandany andro sy tsy mampahomby na tsy mahomby mihitsy. Ireo olona nandalo sekoly sy fianarana dia mametraka izany fanasokajiana izany. Be aza ny mampisaraka ny « asa » sy ny « kabary ». Teo amin’ny Ntaolo malagasy anefa dia tafiditra anaty rafi-piarahamonina ny kabary. Anisan’ny fototra sy hazon-damosina nampijoro rafi-piarahamonina samihafa, satria nifamatotra amin’ny fomba amam-panao izy ireny. Ohatra, amin’ny fanambadiana, na fahafatesana na vodiondry…. Tsy misy fomba mijoro raha toa ny kabary tsy omena ny hasiny. Rehefa miteny hoe « fomba » isika dia midika izany fa « zavatra atao », zavatra iainana. Ohatra amin’izany ny hoe: Izay tsy mahavaly kabary amin’ny fangataham-bady dia voasazy. Mety tsy ho tanteraka aza ny fanambadiana noho ny resaka kabary mifandiso. Fomba izany. Be amin’ny ankizy ankehitrio no tsy « mahalala fomba » intsony. Maika ny hanao zavatra, na te hamita asa fotsiny, hany ka manaonao foana. Dia latsa-danja ny anjara toeran’ny kabary na ny fitenenana. Very ny fomba samihafa mifandray amin’ny kabary, ary miharava ny fototra sy ny andry ijoroan’ny rafi-piarahamonina samihafa. Tsy fandaharan-teny na oha-pitenenana ny kabary, fa miorina amin’ny fomban-tany sy fiarahamonina. Rehefa asaina miasa anefa isika, dia maika ny hanao zavatra. Tsy voavahavaha ny antsipirihan-javatra hany ka « tsy misy fotony » ny zavatra atao. Tsy araka ny fomban-javatra, na fomban-tany. Ohatra, mikorontana ny firenena noho ny fifanoherana ara-politika. Anisan’ny vahaolana naroso teo anivon’ny mpanelanelana iraisam-pirenena aza ny « fampihavanana ». Niteraka rafitra izany. Ilay atao hoe « CFM » na Komitin’ny fampihavanam-pirenena. Nanjary rafitra hiasana izy ity, fa rafitra tsy misy kabary. Izany hoe, tsy amin’ny fomba tokony hijoroan’ny fampihavanana araka ny tenenina. Tsy misy vokany izay atao, satria maika hiasa, tsy ampy ny « discours » na « kabary » momba ny fihavanana. Raha lazaina amin’ny teny vahiny, mahazatra ireo nandia fianarana sy manam-pahaizana, dia hoe tsy ampy « ny théorie » fa maika amin’ny « pratique ». Vokany, misaraka ny « asa sy ny kabary » na ny « théorie sy ny pratique ». Be ny « kabary tsy arahin’asa » na « théorie sans pratique », be « théorie » loatra hoy isika, fa indrindra, « be asa tsy nisy fandinihana » fa maika fotsiny hanao zavatra. Izany no niteraka rafitra samihafa tsy mifanaraka amin’ny « discours » na « kabary samihafa ». Be araka izany ny « mpitari-bato vilam-bava ». Raha tiantsika ny hiova, izany hoe « hanao zavatra ho amin’ny fiovana » mahomby, dia tsy maintsy mahay mampifanaraka ny « asa sy kabary » isika. Tsy maintsy mamorona « fomba vaovao », hampanjary ny « kabary ho asa. Nefa koa manohana ny « fomba » ho zavatra « iainana » araka ny rafi-piarahamonina. Raha tsy izany, dia manjary resabe na ny asa na ny kabary. Zary mitovy ihany ny miasa tsy manjary, ary ny kabary fandaniana andro. Izany no anjara toeran’ny « teny » ifampiresahana sy ifandrisana na « langue na ny verbe ». Na ny « tilikambon’i Babela » na ny « tantaram-pahariana izao tontolo izao » dia nifamatotra tamin’ny teny sy ny kabarin-janahary. Na ny fisarahana nampiparitaka ny olombelona, na ny fahaterahan’ny isam-pirenena, nanana fiteny sy fombam-piarahamiaina vaovao dia tsy nisaraka tamin’ny kabary. Sekoly ngezabe teo amin’ny tontolo malagasy ny kabary, ary tsy nisy zavatra àry raha tsy narahina kabary. Marefo ny fomba, ary mahantra ny fanandratana ny maha olona raha motraka ny fitenenana. Mila fahamatorana ny fijery mba ho marim-pototra ny asa. Miparitaka sy mikorontana ny fiarahamonina tsy mahay mandaha-teny araka ny fomba mampijoro azy. Ny fihavanana manko dia sady soatoavina no fomba ary rafi-piainana manontolo. Dia arindran’ny kabary sy ny fiteny samihafa ireny, ka manjary kolontsaina ivelomana. P.Prospère